Dowladda oo kordhisay muddada la isku diiwaangelin karo imtixaanada qaran | Star FM
Home Wararka Kenya Dowladda oo kordhisay muddada la isku diiwaangelin karo imtixaanada qaran
Dowladda oo kordhisay muddada la isku diiwaangelin karo imtixaanada qaran
Dowladda ayaa labo toddobaad ku kordhisay wakhtiga ay ardayda qaadanaya imtixaanaadka shahaddiga dalka ee KCPE-da iyo KCSE-da isku diwaangalinayaan iyagoona haysta ila 14-ka bishan sideedaad ee August.
Dowladda ayaa dib u dhigidda mudadii la qorsheeyay ee ahayd 31-dii bishii hore ku sheegtay in ay tixgalisay codsiyo ka yimid maamulayasha dugsiyada dalka.
Bayaan uu soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Prof. George Magoha ayuu ku sheegay in golaha imtixannada qaran ee KNEC ay codsadeen wakhti dheeraad ah si loo diiwaangaliyo ardayda aan wali isdiiwaangalin sabab la xariirta saameynta cudurka COVID-19.
Prof. Magoha ayaa sheegay in dadaalkan lagu xaqiijinayo in arday walbo uu u fadhiisto imtixaanaadka shahaadiga ee KCPE iyo KCSE loo baahday wakhti dheeraad ah oo ay ardayda isku diiwaangeliyaan.
Maamuulayaasha dugsiyada ayaa laga codsaday in ay hubiyaan in mudadaan ay ku soo gabagabeeyaan diiwaangalinta ardayda.
Dhanka kale aradayda ku guuldareysta in mudadaan ay isku diiwangaliyaan imtixanaadka shahaadiga oo sida uu qorshuhu yahay ardaydu ay sameeyaan donaan biisha saddexaad ee sanadka 2022-ka ayaa kaliya loo ogolaan doona in imtixanaadka sameeyaan bisha 12-aad ee sanadka danbe.
Waxaa ilaa iyo hadda imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga hoose dhexe ee KCPE-da isku diiwaangeliyay 1,218, 892 oo wax ka dhigta 28, 248 halka dugsiyda sare ay is diiwaangeliyeen arday dhan 824, 392 oo wax ka barta 10, 384 xaruumood.
Tani ayaa u dhiganta koror ah boqolkiiba 2.29 tirada ardayda ee is diiwaangelisay sanadkan marka la barbar dhigo kuwii sanadkii hore oo ahayd 9.54 boqolkiiba.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa dhanka kale sheegay in dugsiyada dowliga iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay oo tirada ardayda dhigta ay ka yar yihiin 30, loo wareejin doono gooba kale oo waxbarasho oo aaggaasi ka ag dhow kuwaas oo ay dhigtaan arday intaa ka badan.
Wasiirka ayaa ugu dambeyntii xusay in ardayda baahiyaha gaarka qabo ay xarumahooda waxbarasho imtixaanka shahaadiga ku sameyn doonaan islamarkaana aan wax laga beddeli doonin.
Previous articleDHAGEYSO:Shacabka Dadaab oo lagu boorriyay ka shaqeynta nabadda
Next articleDHAGEYSO:Kalonzo Musyoka oo la kulmay soomaalida Mombasa